10 Izitobhi Ezimangalisayo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izitobhi Ezimangalisayo EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/12/2021)
Ukubukwa kwendawo, amadolobhana angaqondakali, izinqaba ezithunjiwe, futhi izindlu ezingavamile, lezi 10 izitobhi ezimangalisayo eYurophu zingadinga ukwelula ukuhlala kwakho, kodwa zikufanele ngokuphelele ukuvakashelwa.
1. Izitobhi ezimangalisayo eYurophu: I-Rakotzbrucke, Germany
Icashe epaki elincane e-Saxony, ibhuloho likaDeveli, eyaziwa nangokuthi iRakotzbrucke, lufanele ngokuphelele uhambo oluyinselele oluvela eBerlin. Ibhuloho elinamatshe elivunguza 1860, umbono ohlaba umxhwele futhi oheha abahambi ngenxa yesimo nokwakhiwa kwawo okuyingqayizivele. Izikhonkwane ezicijile ohlangothini ngalunye kanye nebhuloho elivunguzayo kakhulu, kubukeka sengathi ngabe zenziwe usathane uqobo lwakhe, kodwa eqinisweni konke kwenziwe ngabantu.
Ngaphezu kwalokho, izindaba zithi amadoda akha leli bhuloho njengomnikelo kuSathane ngaleso sikhathi, kodwa namuhla iyindawo nje yemilingo. Azikho izinto eziningi ongazenza eduze, ngakho-ke kungcono ukuhlanganisa ukuvakashela e-Rakotzbrucke nohambo oluya e-Kromlau park.
2. I-Champagne-Ardenne, France
Izigodi eziluhlaza kanye nomkhathizwe ongapheli wezivini newayini elimhlophe. Ngakho, Ukuvakashela i-Champagne-Ardenne kungaba yindawo enhle yokumisa ohambweni lwakho oluya e-Italy isifunda sewayini, Tuscany. Izwe le-champagne liphakathi kweParis neLorraine. Ngakho-ke, ukumisa kwenye ye izivini ezinkulu e-Champagne-Ardenne kungaba isengezo esihle kakhulu ku-a amantombazane’ uhambo eParis.
Ngaphezu kwalokho, ukuba yikhaya le-champagne ekhazimulayo kanokusho, lesi sifunda sinomlando omkhulu obalulekile. Ngokwesibonelo, uJoan of Arc omangalisayo wavela endaweni yaseDomremy. Ngakho, cishe uzozwa izindaba ezimangalisayo ngenkathi unambitha iwayini esivini esihle saseFrance. Ngezansi, I-Champagne-Ardenne ingenye ye 5 izitobhi ezimangalisayo kakhulu eFrance.
3. Izitobhi ezimangalisayo eYurophu: I-Oberhofen Castle, Switzerland
Ogwini lwe ichibi elihle nokunwebeka, I-Oberhofen Castle ingenye yezinqaba ezinhle kakhulu eSwitzerland. I-Oberhofen Castle itholakala phakathi kweBern, Interlaken, kanye neLake Lucerne. Ngakho, ukuvakashela e-Oberhofen Castle kanye neLake Thun indawo enhle yokuma emgwaqeni omude omuhle.
Ngaphezu kwalokho, i-castle-turned museum eyaqala ngekhulu le-13 inengadi emangalisayo lapho ungabuka khona izihlahla eziningi ezingavamile., izimbali, kanye nemibono ye-Alps. Ngakho, ungaguqula uhambo lwesigamu lube uhambo losuku olugcwele oluya e-Oberhofen, kanye nepaki elihle eliseduze ukuze ujabulele ukuthula okuthulile kanye nemibono ebabazekayo, kuyilapho izixuku ziphuthuma eLucerne.
Interlaken ukuze Zurich With A Isitimela
ILucerne iya eZurich Ngesitimela
UBern uya eZurich Ngesitimela
IGeneva iya eZurich Ngesitimela
Ibheke iLake Constance enhle, I-Vorarlberg idume ngechibi layo elidumile kanye nokubukwa kwezintaba. Idolobha lase-Austrian lingaphansi kweVorarlberg, enhle kakhulu isiqiwu semvelo yezintaba ezinkulu, kanye nemizila eluhlaza. Kungakhathaliseki ukuthi uhamba usuka e-Liechtenstein uya e-Austria noma eJalimane, I-Vorarlberg iyindawo emangalisayo ohambweni lwakho lwesitimela kulo lonke elaseYurophu.
Ibhulakufesi lasentabeni, noma impelasonto ethulile emvelweni ngaphambi kwedolobha elimatasa, kufanele wenze isikhathi se-Vorarlberg. Leli dolobha alaziwa kakhulu kubahambi, Nokho, I-Vorarlberg yilapho ungathola khona isiko nokudla kwase-Austrian. Ngaphezu kwalokho, uzobe uzungezwe izindawo ezimangalisayo zase-Austrian, amadolobhana, futhi ukubukwa okuhle – i-Austria engcono kakhulu ongayinikeza, kude nezindawo zokuvakasha.
5. Izitobhi ezimangalisayo eYurophu: Freudenberg, Germany
Idolobha elimangalisayo lasendulo iFreudenberg lingelinye lamaJalimane, namadolobha amahle kakhulu aseYurophu. Okukhangayo okuyinhloko lapha 80 noma izindlu ezimhlophe ezinamapulangwe ezinamapulangwe, ebukeka emuhle ikakhulukazi ebusika. Ngakho, uhambo oluya eFreudenberg embozwe yiqhwa i Angisoze ngakukhohlwa engakufunda laphaya, eyodwa ezokubuyisela emuva ngesikhathi namazwe ezinganekwane.
Ngaphezu kwalokho, I-Freudenberg itholakala phakathi kweziqongo zezintaba eziluhlaza, nge 160 km kwe izintaba nemibono emihle. Indawo yaseWestphalia iyathandeka entwasahlobo lapho yonke into iluhlaza futhi iqhakaza. I 6 amahora ohambo lwesitimela ukusuka eBerlin kuwufanele ngokuphelele, for a glimpse of one of the most amadolobha amadala amahle eJalimane.
6. I-Giant's Causeway, e-Northern Ireland
Imibono phezu 40,000 Amakholomu angama-hexagonal basalt ehlela olwandle oluluhlaza eGiant's Causeway abukeka kahle. Izimangaliso zemvelo zineminyaka engaphezu kwezigidi ezingu-6o ubudala, ifinyeleleka ngokuluhlaza, okubomvu, kanye nemizila eluhlaza okwesibhakabhaka. Ngesimo sabo esiyingqayizivele, lamakholomu abeka i-Giant's Causeway kanye ne 7 ezinye izimanga zomhlaba.
Ngakho-ke, akudingekile ukusho, i-Giant's Causeway ingenye ye 10 Izitobhi ezimangalisa kakhulu ongayenza e-Ireland. Ukuthi uhamba usuka eBelfast noma eDublin, thatha isikhathi sokwenza lokhu uhambo losuku oluhle eNyakatho Ireland. Izungezwe izindawo eziluhlaza eziluhlaza zase-Ireland, nolwandle oluluhlaza ezinyaweni zalo, zonke izinyathelo ezihambisana nalezi zinsika zentaba-mlilo zizokusondeza ohambweni lwakho ukuze uthole okungcono kakhulu nokuphawuleka kakhulu emhlabeni..
7. Izitobhi ezimangalisayo eYurophu: Zermatt, Switzerland
Ama-Alps amakhulu abanzi kangangokuthi noma yiliphi iphuzu okhetha ukuma kulo lizokukhipha umoya. Nokho, akukho okufana nemibono emangalisayo ye Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland e Zermatt. Ngenkathi i-Zermatt idume ngemithambeka yayo emangalisayo yokushushuluza, kubukeka kukuhle entwasahlobo nasehlobo.
I-Zermatt iyikhaya komunye wabo izintaba ezinhle kakhulu eYurophu, Matterhorn. Ngenkathi ibukeka inobukhosi futhi ikude ukufinyelela, Ubuhle bukaZermatt wuhambo lwesitimela olusuka e-Basel, Bern, kanye ne-Geneva. Ngakho, ungaza ngempelasonto noma unwebe isitobhi sakho esifushane siye eholidini elikhumbulekayo e-Swiss Alps.
8. I-Alberobello yase-Italy
Uzokhangwa yi-Trulli engavamile, endaweni emangalisayo yaseSalento. Izindlu eziqinile ezinama-facade amhlophe nophahla oluhlotshisiwe zisukela enkathini Yebhulonzi. Lezi zakhiwo eziyingqayizivele kwakufanele zibe ezesikhashana, kodwa abaningi baye basinda esikhathini nesimo sezulu, edolobheni elihle lase-Alberobello. I-Alberobello ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eSouthern Italy, kanye nokuma okukhulu ngasogwini lwase-Italy.
Nakuba leli dolobha lincane, ungahamba kalula uye endaweni ye-Alberobello ne-Trulli ngezitimela zesifunda. Ngale ndlela, ungenza ezinye izitobhi ezimbalwa kwamanye amadolobha ebukekayo, njengoLecce wasendulo, i-bari yolwandle, kanye noTrani. Ngaphezu kwalokho, lamadolobha amahle kancane indlela-eshayiwe e-Italy futhi ayinazo izixuku zezivakashi.
9. Izitobhi ezimangalisayo eYurophu: I-Beaulieu-Sur-Mer Village France
Phakathi kweMonaco neNice, e-French Riviera emangalisayo, I-Beaulieu-sur-Mer iyindawo enhle yokuma ngasogwini lolwandle bese ugxumela ukuze uzicwilise oLwandle iMedithera.. Amabhishi angasese, villas zikanokusho, kanye nemibono emihle ye-Saint-Jean-Cap-Ferrat peninsula, akuphuphi kunalokhu eYurophu.
Ngaphezu kwe-Beaulieu-sur-Mer, kunezindawo eziningi zokuma ezimangalisayo eduze kwe-Les Corniches, imigwaqo yamawa eduze kwe-French Riviera. Uhambo lwamakhilomitha angama-30 luqala eNice luphele eMenton, omunye izindawo ezimibalabala kakhulu eYurophu. Nakuba i-30-km kuphela, kukhona okungenani 10 izitobhi ezimangalisayo kulo mgwaqo owubukhazikhazi eYurophu.
10. Giethoorn, abase Netherlands
Umhlaba wezindlu zamapulazi zotshani kanye 170 iziqhingi, Giethoorn is a idolobhana eliyimfihlakalo eNetherlands. Ngaphezu kwalokho, ehamba nemisele, ngaphansi kwamabhuloho enziwe ngokhuni, ezungezwe izindawo eziluhlaza nezimbali, kuyinto ongasoze wayikhohlwa.
Idolobhana elincane laseGiehoorn elithandekayo endaweni esiqiwini I-Weerribben-Wieden iyisitobhi esimangalisayo ohambweni olunqamula i-Holland. Ngenkathi leli dolobhana elincane seliqandisiwe ngekhulu le-18, sibonga yesimanje izinto zokuthutha umphakathi, manje usungafika e-Giehoorn usuka e-Amsterdam ngaphansi kuka 2 amahora.
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo lokuya kulezi 10 izitobhi ezimangalisayo eYurophu.
Ingabe ufuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Izitobhi Eziyi-10 Ezimangalisayo EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Famazing-stops-europe%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
AmazingStops amazingstopseurope izitobhi StopsInEurope ukuhamba